सम्वृद्धि : उम्लिएका समस्याहरु र पोखिन लागेको जनविश्वास – माहुरी . Bee
गणतन्त्र आए पश्चात कत्ति पनि सुधार हुन नसकेका र राज्यको ध्यानमा पनि नपरेका, तर जनजिवनसंग अत्यन्त निकट रहेर सरोकार राख्ने कुराहरुका बारेमा निरन्तर खवरदारी गर्दै आएको कुरा बिदितै छ। यस अघिको लेखमा हामीले तरकारी र मासुको व्यावसायको दयनिय अवस्था प्रति ध्यानाकृष्ट गराएका थियौं। यस लेखमा हामीले पानी, सूचना प्रविधि, सहरीकरण र फोहरका बारेमा उल्लेख गर्ने जमर्को गर्दैछौं। त्यस दृश्यबाट गणतान्त्रिक राज्यको अकर्मण्यतालाइ प्रष्ट देख्न सकिने छ भने आगामी दिनमा सुधारका कार्यक्रम र जनचेतना जगाउन सकिने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ।
केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउंदै गाविसहरुलाई गाभेर सरकारले नगरपालिकाहरुको घोषणा गरिरहेको छ। पूर्वाधार थपिएका छैनन् । सन् २०१४ मा जम्मा ५८ वटा नगरपालिका थिए तर २०१५ मा २१९ वटा बनाइयो । राज्यले संचालन गरेकै कार्यक्रमका कारण समस्याहरु थपिएका छन् । परिणाम स्वरुप सन् २०१९ मा आइपुग्दा काठमाण्डौ उपत्यकाको आवास क्षेत्र बढेर २६.०६ प्रतिशत र कृषि क्षेत्र घटेर ५५.३० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको छ जबकी सन १९८९ मा ५.१० प्रतिशत जमिन मात्र आवास क्षेत्रले ढाकेको र ८०.५४ प्रतिशत जमिनमा कृषि व्यवसाय संचालित थियो । अझै पनि राम्रो ब्यवस्था हुने हो भने ५५.३० प्रतिशत जमिनमा खाद्ध्य बस्तु उत्पादन गरेर काठमाण्डौ उपत्यकालाई खाध्य असुरक्षाको लिष्टबाट हटाउन रआत्मनिर्भर हुन सकिन्छ; चाँडो गर्नु पर्छ । तर दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ कि यही गती र मतिका बिचमा बाँकी रहेको जमिनलाई अतिक्रमण गरेर काठमाण्डौमा अझै २० लाख मानिस थप्ने योजना रहेको छ । हतारमा गरिएको सहरिकरणबाट भविष्यमा आउन सक्ने संकटबारे गम्भीर हुन जरुरि छ ।
सहरीकरणको योजनासंगै नगरी नहुने काम फोहर व्यवस्थापन पनि हो । बन्दै गरेका नयाँ सहरहरूले फोहरको व्यवस्था कसरि गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनाएको हुनुपर्छ । तर संघिय राज्यहरुले फोहर व्यवस्था कसरि गर्ने भन्ने कुरा पनि निराकार देखिन्छ । उदाहरणका लागि हिजोको दिनमा काठमाण्डौँको टेकुमा फोहर फ्यालिन्थ्यो, अहिले ओखरपौवालाइ डम्पिङ्ग साइट बनाइएको छ । त्यहाँ कुनै स्थायित्व र जनस्वास्थ्य बारेको सुरक्षित योजना यकिन छैन । जनताको स्वास्थ्यका बारेमा कुनै चासो देखिन्न। अस्पतालमा थप्ने खर्चभन्दा स्वच्छ पिउने पानि र फोहर ब्यवस्थापनमा थपिएको खर्च देश र दुनियाका लागि धेरै हितकर हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न जरुरि छ ।
काठमाण्डौ चेतनाहिन नब कुबेरहरुले शोख गर्ने दुर्गन्धित सहरजस्तै भएको छ । मास्क लगाएर हिंडने चलन छ; मास्कको ठुलो कारोवार छ । तर मास्कको मसिनो छिद्रहरुबाट काफी मात्रामा धुलो छिर्छ । त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । यसै क्रममा काठमाण्डौ बाहेक तनहुँको ब्यास नगरपालिका र लमजुङ्गको मध्यपुर नगरपालिका पनि हेर्ने मौका मिल्यो । यिनिहरु पनि पूर्वाधार बिना हतारमै घोषणा गरिएका नगरपालिका हुन। ती बिकासोन्मुख शहरहरुमा पार्किङ्गको व्यवस्था छैनन, जताततै गाडि, मानिस र जनावरको चाप छ। घरहरुको बिचमा एम्बुलेन्स, दमकल हिडने निकास छैन। आपतकालीन समयमा उद्धार गर्नका लागि चाहिने चोक-चौका कतै केहि छैन। धुलो बिशेषता नै हो।
अहिलेदेखि नै शहरी व्यवस्थापनमा कठोर नियम लागु भएको हुनुपर्ने; तर त्यस्तो देखिन्न । यीनीहरुले संचालन गरेको डम्पिङ्ग साइटको न स्थायित्व छ नत सुरक्षित ब्यवस्था नै ! तर जमिनमाथि तिब्र अतिक्रमण गरेर घडेरी बेच्ने, प्राकृतिक बिनास र खाद्ध्य असुरक्षा भने बढदै गएको छ । महाभुकम्पको असर र काठमाण्डौँको गल्तिबाट कसैले पाठ सिकेको पाईएन । व्यवस्था परिवर्तनसंगै सहरिकरणको ढांचा, मूल्य-मान्यता र पूर्वाधार विस्तारमा कुनै भरपर्दो विधि अपनाइएको छैन, जसबाट सहर र गाउँको सम्पर्क बिस्तार होस । आन्तरिक आप्रवास कम होस, सहरी गरिवी कम हुन सकोस, खाद्यान्न लगायत इन्धनमा आत्म निर्भर हुन सकोस; त्यस्तो केहि देख्न सकिन्न । मुख्य कुरा त सहरको बिस्तृत योजना हुनु पर्छ । त्यो नै छैन । हचुवाको भरमा सडक बिस्तार गरेर जग्गाको भाउ बढाउने गरिएको छ; यत्तिमै रमाइलो छ सबैलाई!
काठमाण्डौ अहिले काकाकुलको वस्ति जस्तै भएको छ । वागमती, विष्णुमति लगायतका नदीनालाहरु सुकिसकेका छन । खेतबारीको कुरै छाडौँ; पिउने पानीकै अभाव छ। मेलाम्चिको सपना बाँढेको पनि ३० बर्ष भैसक्यो । काठमाण्डौका लागि १० बर्ष भित्र पुरा हुने योजनासहित झन्डै ३० बर्ष अघि लागुभएको मेलाम्ची खानेपानी योजनाले अहिलेको आवश्यकतालाई धान्न सक्ने देखिन्न । त्यसैले स्थानिय श्रोत र बैकल्पिक योजनाको पनि व्यवस्था हुन आवश्यक छ । जमिन खोतलेर बनाइएका इनारको पानीले कति थेग्ने! बालाजु, मनोहरा, बुढानिलकण्ठ, गोदावरी, सुन्दरिजल, चोभार र मातातिर्थमा बगेर खेर गएको स्थानिय पानीका श्रोतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
नदि किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा रुख रोपेर पानीको श्रोत थप गर्न सकिन्छ । नजिकैका ठुला नदीहरु, हिउँतालको पानी सस्तोमा उत्पादन गरेर सहरमा आपूर्ति गर्न नसकिने होइन । उदाहरणका लागि मर्स्याङ्गदिकै पानिलाइ पनि ब्यवस्थित कार्यक्रम मार्फत सहर तिर ओसार्न सकिन्छ । अर्थात माग पूर्ति गर्ने विभिन्न उपायहरु हुन्छन त्यसतर्फ़ योजना र कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढेको देखिनुपर्छ । रातभर जागा बसेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने, ट्याङ्करको पानि किन्नु पर्ने, दिनभर सार्वजनिक धाराहरुमा पानि लाइन बस्नुपर्ने गृहणीहरुको वाध्यतालाई हाम्रो प्रजातन्त्रले सम्बोधन गरेकै छैन । तर नारी अधिकाकारका नारा, भाषण र आन्दोलन भने भईनै रहेका छन । त्यहाँ पनि यस्ता समस्या उठने गरेको पाइँदैन । सम्वृद्धिको खाका शब्दमा होइन व्यवहारमा देखिन जरुरि छ ।
नेपालमा समस्याहरुको आयाम निकै फराकिलो हुँदै गएको छ। समस्या उम्लिदै गएका छन। त्यसले गणतन्त्र प्रतिको जनविश्वास पोखिंदै गएको कुरा असन्तुष्टिका आवाजले बोलिरहेकै छन। हतारमा गरिएको सहरिकरणबाट भविष्यमा आउन सक्ने संकटबारे गम्भीर हुन जरुरि छ। केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउंदै गाविसहरुलाई गाभेर सरकारले नगरपालिकाहरुको घोषणा गरिरहेको छ। पूर्वाधार थपिएका छैनन्। शहरिकरणकै कारण काठमाण्डौ अहिले काकाकुलको वस्ति जस्तै भएको छ। वागमती, विष्णुमति लगायतका नदीनालाहरु सुकिसकेका छन। सूचना प्रविधिमा अलिकति आशा गर्ने ठाउँ छ। तर त्यसको आयत, कर राजस्व, सेवा उपलब्ध गराउने छिटो छरिता कार्यक्रमको नजरबाट अवलोकन गर्दा खुसि हुने ठाउँ छैन। एन्सेलको कर प्रकरणले राज्यले कर गुमाएको छ भने कम्पनिले प्रतिष्ठा गुमाएको छ। विजुलीको आपूर्तिमा सुधार आएको भए पनि कुनै पनि समय बिद्ध्युत व्यवस्थापनमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर सरकारले जनतालाई फेरी अँधेरो तर्फ़ धकेल्ने हो कि भन्ने शंका जारि छ। नगरपालिकामा बसेको बहानामा गरिव जनतालाई विना पूर्वाधार राज्यले कर असुल गरेर प्रशासनिक खर्चमा लगाउनु अपराध हो; यसमा राज्य र त्यसका संचालकहरु जिम्मेवार हुनै पर्छ। क्रमश आर्को लेखमा
अन्य रोचक पोष्टहरु
Tagged काठमाण्डौ, खाने पानी, पानीको अभाव, प्रवासी नेपाली, सम्वृद्धि, सहरीकरण, सूचना प्रविधि
Previous Postयी कुराहरु गणतन्त्रमा पनि उस्तै छन, सम्वृद्धि त परै जावस !
Next Postसम्वृद्धि : समस्याहरुको निरन्तरता र निरासाको वादल
1 thought on “सम्वृद्धि : उम्लिएका समस्याहरु र पोखिन लागेको जनविश्वास”